Amandla okuqhuba: 9.375 KW.
Umthamo wemveliso wemihla ngemihla womkhenkce: 3000 kgs zeityhubhu zomkhenkce ngeeyure ezingama-24.
Amandla okuqhuba: 15.625 KW.
Umthamo wemveliso wemihla ngemihla womkhenkce: 5000 kgs zeityhubhu zomkhenkce ngeeyure ezingama-24.
Umatshini womkhenkce we-2T
Amandla okuqhuba: 6.25 KW.
Ubunzima bomkhenkce: 1.8-2.2mm.
Umthamo wokugcina umgqomo womkhenkce: 500kgs yeeflakes zomkhenkce okanye ezenziwe ngokwezifiso.
Umthamo wemveliso wemihla ngemihla womkhenkce: 2000 kgs of ice flakes ngeyure ezingama-24.
Umthamo wokugcina we-Ice bin: 1500 kgs ye-ice flakes okanye eyenziwe ngokwezifiso.
Umthamo wemveliso wemihla ngemihla womkhenkce: 3000 kgs of ice flakes ngeeyure ezingama-24.
Umthamo wokugcina we-Ice bin: 2500 kgs ye-ice flakes okanye eyenziwe ngokwezifiso.
Umthamo wemveliso wemihla ngemihla womkhenkce: 5000 kgs of ice flakes ngeyure ezingama-24.
10T umatshini ice ice
20T umatshini ice ice
Amandla okuqhuba: 62.5 KW.
Umthamo wokugcina umgqomo womkhenkce: 10,000 kgs of ice flakes okanye ngokwezifiso.
Umthamo wemveliso wemihla ngemihla womkhenkce: 20,000 kgs of ice flakes ngeyure ezingama-24.
I-300kg / imini yomatshini we-ice flake + 150kg umgqomo wokugcina umkhenkce.
Umatshini uneplagi-noyilo lokudlala.Ilungele ukwenziwa komkhenkce emva kokudibanisa okulula namanzi kunye namandla.Umkhenkce uphuma ngaphakathi kwemizuzu emi-5 emva kokuba umsebenzisi ecinezele iqhosha lokuqala.
Yonke imisebenzi yokwenza umkhenkce yenziwa ngokupheleleyo ngokuzenzekelayo phantsi kolawulo lwePLC.
Inkqubo iya kuzikhusela ekunqongophelweni kwamanzi / umgqomo womkhenkce ogcweleyo / unikezelo lwamandla olungazinzanga / ubushushu obuphezulu okanye obubandayo bendawo / kunye nezinye iintlobo zokusilela.
Ubushushu obuyilelweyo obuphuphumayo buthabatha i-20C, nto leyo iqinisekisa umgangatho omhle kakhulu wamaqhekeza omkhenkce.Iiflakes zomkhenkce ezomileyo nezishinyeneyo zomkhenkce ziphuma kumatshini.
Umgqomo womkhenkce ongama-300kg/ngosuku womatshini womkhenkce unokugcina ii-150lgs ze-ice flakes, ezingaphezulu komkhenkce owenziwe ngexesha lasebusuku.Ke umsebenzisi unokuwushiya umatshini kwaye awenze asebenze yedwa ngexesha lasebusuku.Umgqomo womkhenkce uya kuzaliswa ngumkhenkce omninzi xa umsebenzisi evula umnyango womgqomo womkhenkce ekuseni.
I-80% yamacandelo kumatshini womkhenkce ziimpawu ezidumileyo zamazwe ngamazwe ukuqinisekisa ukusebenza kakuhle kunye nexesha elide lenkonzo.
I-1000kg / imini yomatshini we-ice flake + 400kg umgqomo wokugcina umkhenkce.
Umatshini uneplagi-noyilo lokudlala.Ilungele ukwenziwa komkhenkce emva kokudibanisa okulula namanzi kunye namandla.Umkhenkce uphuma ngaphakathi kwemizuzu emi-5 emva kokuba umsebenzisi ecinezele iqhosha lokuqala.Yonke imisebenzi yokwenza umkhenkce yenziwa ngokupheleleyo ngokuzenzekelayo phantsi kolawulo lwePLC.Inkqubo iya kuzikhusela ekunqongophelweni kwamanzi / umgqomo womkhenkce ogcweleyo / unikezelo lwamandla olungazinzanga / ubushushu obuphezulu okanye obubandayo bendawo / kunye nezinye iintlobo zokusilela.Ubushushu obuyilelweyo obuphuphumayo buthabatha i-20C, obuqinisekisa ukuhamba kakhulu...
Iividiyo zokubonisa ii-evaporators zomkhenkce esizenzileyo ngaphambili.IHerbin Ice Systems yenye yezona zinto zivelisa i-ice evaporators ezinkulu eTshayina.Senza kwaye sithengise ii-evaporators ze-ice flake kwezinye iinkampani zaseTshayina zoomatshini bomkhenkce nakwiimarike zaphesheya.I-60% yoomatshini bomkhenkce baseTshayina baxhotyiswe ngee-evaporators zethu ze-ice flake.Ii-evaporator zethu ze-ice flake zikwasetyenziswa kakhulu kwihlabathi jikelele, njenge-USA/Mexico/Brazil/Greece/South Africa/ njalo njalo.Ii-evaporator zomkhenkce zeflake zilungile ...
I-500kg / imini yomatshini we-ice flake + 300kg umgqomo wokugcina umkhenkce.
Umatshini uneplagi-noyilo lokudlala.Ilungele ukwenziwa komkhenkce emva kokudibanisa okulula namanzi kunye namandla.Umkhenkce uphuma ngaphakathi kwemizuzu emi-5 emva kokuba umsebenzisi ecinezele iqhosha lokuqala.Yonke imisebenzi yokwenza umkhenkce yenziwa ngokupheleleyo ngokuzenzekelayo phantsi kolawulo lwePLC.Inkqubo iya kuzikhusela ekunqongophelweni kwamanzi / umgqomo womkhenkce ogcweleyo / unikezelo lwamandla olungazinzanga / ubushushu obuphezulu okanye obubandayo bendawo / kunye nezinye iintlobo zokusilela.Ubushushu obuyilelweyo obuphuphumayo buthabatha i-20C, obuqinisekisa ukuba...